Ha u safrin Spain, Portugal, Cyprus, Cuba, Kyrgyzstan oo dib uga fiirso Israel
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Ha u safrin Spain, Portugal, Cyprus, Cuba, Kyrgyzstan oo dib uga fiirso Israel
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Kuba Cuba • Wararka Qubrus • Caafimaadka Warka • Israa’iil Wararka Jebinaya • Wararka Kyrgyzstan • News • Wararka Burburinta Portugal • Wararka Spain • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Israa'iil waxay dejisay isbeddel cusub oo cabsi leh
Warshadaha safarka iyo dalxiiska ee labada dhinac ee Atlantic waxay la halgamayeen inay dib u furaan safarka. Wadamada EU -da ayaa furmay, halka Mareykanku uu wali u xiran yahay socotada shisheeye. Hadda Mareykanku wuxuu muwaadiniintiisa u sheegayaa inaysan u safrin qaar ka mid ah waddamada Yurub iyo Israa'iil.
CDC, Xarunta Mareykanka ee Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada iyo Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa Isniintii labaduba ka digay safarka Spain, Portugal, Cyprus iyo Kyrgyzstan sababta oo ah tirada sii kordheysa ee COVID-19 ee dalalkaas.
Isla mar ahaantaana Israa’iil ayaa hadda lagu sifeeyay qaybta 3 heerka La -talinta Safarka ee Mareykanka, oo ah tan labaad ee ugu sarreysa
Kala duwanaanshaha Delta wuxuu ku fidaa koontaroolka meelo badan oo adduunka ah, wuxuuna uga digayaa dadka Mareykanka inay u safraan dibedda kama digayaan isla musaafiriinta inay sii wataan safarka gudaha
CDC waxay sare uqaaday latalinteeda safarka "Heerka Afaraad: Aad u Sareysa" wadamadaas oo u sheegaysa dadka Mareykanka inay ka fogaadaan safarka halkaas, halka Wasaarada Arimaha Dibada ay soo saartay latalin "Ha Safrin".
Spain ayaa xuduudaheeda u furtay dalxiisayaasha Mareykanka bishii Juun waxayna tan iyo xilligaas ahayd meel ay aad u jecel yihiin dadka Mareykanka ah.
TAP Air Portugal waxay ku laaban doontaa San Francisco iyo Chicago - waa laga yaabaa inay xilli hore tahay
CDC -da ayaa Isniintii sidoo kale kor u qaadday qiimeynteeda “Heerka Afaraad” ee Cuba, halka Waaxda Arrimaha Dibadda ay horay Cuba ugu lahayd qiimeynta “Ha Safrin”.
CDC-da ayaa sidoo kale walaac ka muujisay tirada sii kordheysa ee kiisaska COVID-19 ee Israa’iil, Daanta Galbeed, iyo Gaza, iyadoo kor u qaadaysa ogaysiiskeeda caafimaad ee socdaalka laba heer “Heerka 3: Sare,” halka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ay ku qiimeysay Israa’iil “Heerka 3 : Dib uga fiirso Safarka. ”
Irael had iyo jeer waxaa loo arki jiray inay si buuxda u tallaalan tahay oo ay khatar yar tahay
Bishii Juun, CDC waxay hoos u dhigtay qiimeynta la-talinta safarka ee Israa'iil "Heerka 1: Hoose."
Saynisyahannada Israa’iil ayaa hadda sheegaya in Pfizer uu ka waxtar yar yahay 40% si uu si buuxda uga ilaaliyo dadka la tallaalay inay qaadaan fayraska. Si kastaba ha noqotee waxay yiraahdaan tallaalidda waxay u badan tahay inay iska ilaalinayso in isbitaal la dhigo ama ka sii dara.
CDC iyo waaxda arimaha dibada ayaa sidoo kale Armenia gaarsiiyay "Heerka 3".
Qiimaynta “Heerka 3” ayaa sheegaysa in dadka socotada ah ee aan la tallaalin ay ka fogaadaan safarka aan muhiimka ahayn ee ay ku tagayaan dalkaas waana hal heer oo ka hooseeya CDC -da darajada ugu daran ee safarka.
Bishii Juun, CDC waxay fududeysay talooyinka socdaalka ee in ka badan 110 dal iyo dhulal maadaama ay dib u eegis ku sameysay qaababkeeda digniinta safarka iyadoo lagu saleynayo qatarta COVID-19.